Inqilaabkii dhicisoobay ee dalka Turkiga: By Maxamad Cumar Maygaag – Taag | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on July 18, 2016 by sdwo · No Comments
Inqilaabkii Turkiga ee fashilmay wuxuu sababay dhimashada 200 oo qof, 109 ay askar yihiin, inta kalena shacab iyo dhaawaca in ku dhaw 1500 qof . Ilaa 200 askarta inqilaabka waday baa isdhiibay, in ku dhaw 1500 askarina waa la xidhay. Bilihii iyo sannadihii ugu danbeeyey dalka Turkiga oo ka mid ahaa wadamada ugu xasiloonida wanaagsan ee caalamka ee loo dalxiis tago ayaa galay xaalado aan hore u soo marin.
Waxa aad ugu batay dhacdooyin argagaxis ah oo miinooyin lagu qarxiyey magaalooyin ay ka mid yihiin Ankara – caasimadda dalka. Falalkaa argagaxis dad badan baa ku geeriyooday. Inkastoo dawladda Turkigu ayna filayn inqilaabkii xalay, waxyaabo badan baa u sabab u ah oo dhiiri galiyey askartii ku kacday. Madaxwaynihii ugu horeeyey ee dalkan Turkiga xukumi jiray kadib markii ay dhacday madaxtooyadii boqortooyadii Cusmaaniyaddu waxa la odhan jiray Mustafa Kamal Ataturk.
Waa Madaxweynaha qudha ee ummadda Turkigu u aqoonsanyihiin in uu yahay aabaha qaranka Turkiga. Ataturk horumar wayn buu dalkiisa u horseeday wuxuuna kala saraay in dawladda iyo diintu shaqo isku yeeshaan lana isku xidho. Taas oo ummadda Turkiga diinta Islaamka ka fogaysay una horseeday in ay dhaqanka galbeedka qaataan. Recep Tayiip Erdogan, Madaxwaynaha imika dalka Turkiga xukuma ee xalay sigtay in xilka lagala wareego wuxuu xukunka qabsatay 2014.
Intaa ka hor Ra’iisul Wasaaraha dalka ayuu ahaa . Waa nin diinta Islaamka ku dhaqma oo xaafidul Quraan ah. Dagaalka ka socda wadanka Suuriya, Madaxwayne Recep Erdogan iyo dawladdiisu si cad bay uga soo horjeedsadeen Madaxwayne – Bashar Al-Asad waxayna ku eedeeyeen in uu sababay dilka boqolaal kun oo ka tirsan shacabkiisa. Sidaa darteed dawladda Turkiga waxa lagu eedeeyaa in ay maalgaliso mucaaradka Dawladda Suuriya dagaalka kula jira.
Dagaalka ka socda Suuriya wuxuu rajo siiyey Ururada dhaqdhaqaaga ee Kurdishka ee ay ka mid yihiin PKK. PKK ilaa 70kii ayey wadanka Turkiga dagaal kula jiray si ay Turkiga uga xoreeyaan degaanka ay deganyihiin dadka Kurdishku ee Bariga Turkiga. Dadka Kurdishku mandaqada way ku baahsanyihiin oo waxa kale oy degan yihiin qaybo ka mid ah Suuriya, Ciraaq iyo Eeraan. Xasilooni darrada Turkiga ka jirta ayaamahan, Turkigu wuxuu ku eedaynayaa PKK iyo ISIS laakiin kacdoonkii militariga ee xalay wuxuu ahaa mid muujinaya in cadowga dawladda Turkigu ahayn PKK iyo ISIS oo qudhee, Madaxweynaha Turkiga iyo dawladdiisa laftooda fartu ku godantahay. Recep Tayiip Erdogan waxa lagu eedeeyaa in uu kaligii taliye cabudhiya saxaafadda iyo dimiqraadinimada yahay. Waxa kaloo lagu eedeeyaa in uu qorshaynayo in uu dastuurka wadanka wax ka bedalo si uu awoodiisa u sii xoojiyo. Waxaan u malaynayaa wada-hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya ee uu Madaxwayne Erdogan iyo dawladdiisu hormoodka ka ahaayeen in xaggaa lagu iloobi doono inta ay Turkigu aqalkooga hagaajinayaan.
Illaahay ummadda Turkiga ha u gargaaro. Aamiin.